Gen. Jim Owoyesigire ‘’ Waa in ay wada jir u howlgalaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya | Sahan Media Group
Taliyaha guud ee ciidamada howlgalka midowga Africa AMISOM Gen. Jim Owoyesigire oo khudbad u jeedinayay ciidamada howlgalka midowga Africa ee ku sugan Jowhar ayaa sheegay in ay looga baahan yahay ciidamada midowga Africa in ay ka bar bar dagaalamaan ciidamada kale ee dowladda Soomaaliya.
Taliyaha ayaa sheegay in ay inta badan dhacdo labada ciidan in mid gaar uu ula dagaalamo Al-shabaab taasoo hoose u dhigeysa ayuu yiri awooda ciidamada ee dagaalka ka dhanka Ururka hubeysan ee Al-shabaab.
Waxaa kaloo uu sheegay in ay jirto daaarasad la doonayo in lagu sameeyo xaqiijinta amniga xarumaha ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin qeybaha kala duwan ee dalka, isaga oo intaa ku daray in wixii hadda ka danbeeya loo baahan yahay in loo jiheysto dagaal ka dhan ah wax uu ugu yeeray kooxaha Argagixisada.
‘’Waxaan ku baaqeynaa howlgal deg deg ah iyo dagaal lala galo kooxaha argagixisada, labada ciidan waa in ay arintan wada jir uga qeyb-galaan’’ ayuu yiri Gen. Jim Owoyesigire.
Al-shabaab ayaa wali ku xoogan deegaanno ka tirsan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya iyaga oo weerarro joogta ku qaadan xarumaha ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka midowga Africa AMISOM.